Indlela yokwenza i-Slim nge-Borax kunye neGlue Glue
Classic Slime Recipe
Iprojekthi engcono kakhulu yesayensi onokuyenza ngokusebenzisa i-chemistry yenza i-slime. I-gooey, ilula, kwaye iyonwabile! Kwakhona kulula ukwenza.
Hlanganisa Izinto Zakho Ezibuhlungu
Ukwenza i-slime, yonke into oyifunayo i-borax, iglue emhlophe, amanzi kunye nokubala kokutya. UGary S Chapman, Getty Images
I-Slime ithatha izithako ezimbalwa kunye nemizuzu embalwa ukwenza ibhetki. Landela le miyalelo ebhaliweyo ngeyiteyathelo okanye ubukele ividiyo ukuze ubone indlela yokwenza i-slime. Ukuze uqalise, hla nganisa izinto ezilandelayo:
Iglue egciniweyo (njengo-Elmer's ™)
Umbala wokutya (ngaphandle kokuba ufuna i-white colored slide)
Qaphela, unokwenza i- slime usebenzisa i-glue ecacileyo kunokuba iglue emhlophe. Olu hlobo lweglue luza kuvelisa i-slim translucent. Ukuba awunayo i-borax, ungasebenzisa isisombululo se-lens saline endaweni yesipululo se-borax. Isisombululo se-saline sine-sodium borate.
Lungiselela iSlime Solutions
Hlanganisa i-glue, amanzi, kunye nombala wokutya ngokwahlukileyo kwi-borax kunye namanzi. Anne Helmenstine
Kukho iziqendu ezimbini kwi-slime. Kukho isisombululo se-borax kunye namanzi kunye ne-glue, amanzi kunye nesisombululo sokubala. Zilungiselele ngokwahlukileyo.
Hlanganisa 1 ithisipuni ye-borax kwi-1 indebe yamanzi. Gcina uze udibanise i-borax.
Kwisitya esisodwa, xuba i-1/2 indebe (4 oz) emhlophe iglue nge 1/2 indebe yamanzi. Yongeza umbala wokutya, ukuba ufuna.
Ukuba uthanda, unokudibanisa kwezinye izithako, ezifana ne-glitter, ubuhle beentambo ze-foam, okanye u-powder powder.
Ngethuba lokuqala owenza i-slime, mhlawumbi ingcinga efanelekileyo yokulinganisa izithako ukuze ukwazi ukuba ulindele ntoni. Xa unamava amaninzi, zikhululeke ukuhlula ixabiso le-borax, iglue, namanzi. Usenokufuna ukuqhuba uvavanyo ukuze ubone ukuba yeyiphi isithako esilawula indlela esomeleleyo ngayo i-slime kwaye echaphazela indlela epholileyo ngayo.
Hlanganisa iSlime Solutions
Xa udibanisa izicombululo ezimbini, i-slime iya kuqalisa ngokukhawuleza ukupolisa. Anne Helmenstine
Emva kokuba uchithe i-borax kwaye uhlaziye i-glue, ulungele ukudibanisa izicombululo ezimbini. Gcina esinye isisombululo kwisinye. I-slime yakho iya kuqala ukupompoza ngokukhawuleza.
Musa ukuxhalabisa ngamanzi amaninzi asele emva kokuba i-slime yakho yenziwe. Anne Helmenstine
I-slime iya kuba nzima ukuyichukumisa emva kokuxuba i-borax ne-glue solutions. Zama ukuzixuba ngokubanzi njengoko unako, uze usikhuphe kwisitya uze uqedele ukuxuba ngesandla. Kulungile ukuba kukho amanzi anemibala esele kwisitya.
Izinto Ezozenzayo ngeSlime
URyan uyakuthanda. Anne Helmenstine
I-slime iya kuqala njengepolymer eguquguqukayo . Ungayolula kwaye ubukele ukuhamba kwayo. Njengoko usebenza ngakumbi, i-slime iya kuba yinto ekhuni kwaye ifana ne-putty . Emva koko ungayifaka kwaye uyibumba, nangona iya kulahleka ukuma kwayo ngexesha. Ungadli i-slime yakho kwaye ungayishiyi kwiindawo ezinokubakho ngombala wokutya. Ukucocwa naluphi na umxhesho othungayo ngamanzi afudumele, asepha. I-Bleach isenokususa umbala wokutya, kodwa ingonakalisa nemida.
Gcina Ukholo Lwakho
U-Sam wenza ubuso obunomsila kunye ne-slime, engayidli. I-Slime ayiyona into enobungozi, kodwa ayikho ukutya. Anne Helmenstine
Gcina yakho i-slime kwisikhwama se-ziplock esitywinwe, mhlawumbi kwifriji. Inambuzane ezinambuzane ziza kushiya i-slime yodwa ngenxa yokuba i-borax iyinkunkuma yesifo sezilwanyana, kodwa uya kufuna ukuhlutha isithintelo sokuthintela ukukhula kwesikhunta ukuba uhlala kwindawo ene-mold high. Ingozi enkulu kwi-slime yakho ikhuphuka, ngoko gcina unatywina xa ungayisebenzisi.
Qonda indlela Ukusebenza kweSlime
Abantwana bathanda ukudlala nge-slime. UGary S Chapman, Getty Images
I-Slime ngumzekelo we-polymeri . Yenziwe ngokuqhagamshela iinqununu ezincinci (iinqununu okanye iiyunithi ze-mer) ukwenza ietyuniti eziguquguqukayo. Ininzi yendawo phakathi kwamaketanga azaliswe ngamanzi, ukuvelisa into enesakhiwo esiphezulu kunamanzi amanzi, kodwa inhlangano encinci kunokuba yomelele .
Zininzi iintlobo ze-slime azikho izixhobo zamanzi eziNewtonian. Oko kuthetha ukuthini ukukwazi ukuhamba okanye i-viscosity ayikho rhoqo. Ukungahambi kakuhle kwenguqu kulandelwa ngokwemiqathango ethile. U-Oobleck ungumzekelo omhle wohlobo oluthile lwe-slim ne-Newtonian. U-Oobleck uhamba njengamanzi amanqabileyo, kodwa unqabela ukuhamba xa ushicilelwe okanye uhlwaywe.
Iipropati ze-borax kunye ne-glue slime zingatshintshwa ngokudlala kunye nemilinganiselo phakathi kwezibambiso. Zama ukongeza i-borax okanye i-glue ngaphezulu ukuze ubone ukuba ichaphazela njani kwindlela eselula ngayo okanye ukuba likhulu kangakanani. Kwipolomeri, iamolekyu zenza iinqamlezo zomnqamlezo kwiindawo ezithile (kungekhona). Oku kuthetha ukuba kukho isithako esisodwa okanye enye ishiywe kwiresiphi. Ngokuqhelekileyo isithako esingaphezu kwamanzi. Kuyinto evamile ukuba amanzi asele kwisitya xa wenza isitifiketi.
I-Demo-Friendly Elephant Toothpaste Demo
Projekthi zeSayensi zeSayensi
Indlela yokwenza iPetchup Packet Cartesian Diver
Yiyiphi i-Gasoline okufanele uyithenge?
Iiprojekithi eziphezulu zeKhemistry zabantwana abanobuhlungu
I-Mentos kunye neSoda Project
Iprojekthi Yenzululwazi yeZiko lokuTyiswa kwe-Egg
Sika iiNqununu zokuLondolozwa kweNkundla
Uvavanyo lwe-Iceberg lwasekhaya
Ionic Compound Inkcazo
Iikitikiti zifumana njani kuwe?
Iphrofayli kunye nezobugcisa bukaYuda Iskariyoti
I-Freestyle okanye i-Front Crawl Drills yokuPhucula iNkqubo yokuThabisa
Matt Cohen | UGqirha jikelele weZibhedlele
Ithemba: I-Virtual Theological
8 I-Great Lever-Action Deer okanye i-Big Game Hunting Rifles
Imfazwe YaseMerika: iMfazwe yaseWestport
Ixesha lexesha lexesha loMculi uPaul Gauguin
Iingcamango zeProjekthi zeTornado Science Fair
Ukusebenzisa uhlalutyo lokuhlalutya ukuqonda ukufumana ubunzima
10 Upton Sinclair Quotes Ukwazi
Iingoma eziphezulu zeHockey
I-inthalpy ye-Atomisation Inkcazo
Iingcebiso ezi-5 malunga nendlela yokubuyisela kwiNhlangano yeeTalente eziThathaka
Umthandazo KaDavide Wokubulela
Yayiyintoni i-Qajar Dynasty?
Indawo yokuguqula emthandazweni